सैलुन व्यापार रहस्य: १० कार्यक्षम मार्केटिंग विचारहरू जसले तपाईंलाई थप ग्राहकहरू सुरक्षित गर्न मद्दत गर्दछ Martech Zone
सैलुनहरू उनीहरूको स्थान, उनीहरूको स्टाफ र विशेषज्ञहरू, उनीहरूको उपकरणहरू, र उनीहरूको उत्पादनहरूमा धेरै लगानी गर्छन्। जहाँसम्म, उनीहरूले लगानी गर्न प्रायः उपेक्षा गर्छन् एक चीज भनेको उनीहरूको मार्केटिंग अभियानहरू। अन्यथा कसरी ग्राहकहरूले तपाईंको शानदार सैलून फेला पार्न सक्दछन्?
जे होस् मार्केटिंग मास्टर गर्न को लागी मुश्किल चीज हुन सक्छ, यो अझै व्यवस्थित छ, र डराउनुपर्दैन। त्यहाँ धेरै मार्केटिंग विचारहरू प्रयोग गरिएका छन् र सैलुनहरूको लागि परीक्षण गरिएको छ जुन ग्राहकलाई आकर्षित गर्न र ग्राहक प्रतिधारण सुधार गर्न राम्रोसँग काम गर्दछ।
यदि तपाईं एक संघर्षरत सैलुन मालिक उनीहरूको मार्केटिंग कार्यक्रमको मासु खोज्न चाहानुहुन्छ भने, त्यसोभए थप ग्राहकहरूलाई सुरक्षित गर्न के मार्केटिंग आईडियाहरू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि पढ्नुहोस्।
एक-मित्र प्रोग्राम रेफर गर्नुहोस् - तपाईंको ग्राहकको संख्या बढाउने एउटा तरिका तपाईंसँग पहिले नै भएकोसँग काम गरेर हो। तपाईं कसरी सोचिरहनुभएको हुन सक्छ। खैर, पाठ्यक्रम को एक रेफरल कार्यक्रम को माध्यम बाट। A रेफरल कार्यक्रम तपाइँको वर्तमान ग्राहकहरु लाई लक्षित एक कार्यक्रम हो। यस मार्केटि idea विचारले तपाइँका ग्राहकहरुलाई प्रोत्साहन दिन्छ एक साथीलाई तपाइँको सलुनमा सन्दर्भ गर्न प्रत्येक सफल रेफरलको लागि छूट दिएर। रेफरल प्रोग्रामको बारेमा राम्रो कुरा भनेको यो हो कि मानिसहरूले तपाईलाई चिसो कल वा ईमेल भन्दा रेफरलमा काम गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ। जब सिफारिश एक विश्वसनीय र एक करीबी स्रोत बाट आउँछ, यो नयाँ ग्राहकहरु को ध्यान को लागी अधिक संभावना छ। सन्दर्भित ग्राहकहरू सामान्य ग्राहकहरूको भन्दा बढी वफादार भएको पाइएको छ। अर्को प्लस यो हो कि तिनीहरू तपाईंको सलुन उत्पादनहरू र सेवाहरू प्रयोग गर्न अधिक ग्रहणशील छन्।
अन्य व्यवसायको साथ साझेदारी फार्म - त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् एउटा व्यक्तिले तिनीहरूको व्यवसायको साथ आविष्कार गर्न। प्रतिस्पर्धाको शीर्षमा रहने एउटा तरिका अन्य व्यवसायहरूसँग सहकार्य गरेर हो। प्राय: हामी अन्य व्यवसायहरूसँग सहकार्य गर्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्दछौं र यसले तपाईंको दुबै व्यवसायको लागि बढी यातायात र राजस्व कसरी चलाउन सक्छ। एक सैलून को रूप मा, तपाईं धेरै व्यापार संग सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय मा निर्भर गर्दछ, तपाईं व्यापार संग सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं संगै सौन्दर्य उद्योगमा पनि छ। उदाहरण को लागी, तपाई आफ्नो मनपर्ने मालिश स्थान संग कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, वा हुनसक्छ तपाई स्पाको साथ सहकार्य गर्न चाहानुहुन्छ। यस मार्केटि idea विचारको साथ, तपाईं केवल तपाईंको ग्राहकमा ट्याप गर्न सक्नुहुनेछ तर अन्य व्यवसायको ग्राहकमा पनि। यो तपाईंको दुबै व्यवसायका साथै ग्राहकहरूको लागि पनि विन-विन स्थिति हुनेछ किनकि उनीहरूले लिने डिलहरूको कारण पनि।
सैलुन पदोन्नतीहरू प्रस्ताव गर्नुहोस् - कसले छुट मा मन पराउँदैन? यसैले छुट, बिक्री, र पदोन्नतिहरू सधैं एक समय-परीक्षण मार्केटिंग योजना हो जुन कुनै पनि व्यवसायको लागि राम्रोसँग काम गर्दछ। तपाईको बिक्री प्रचार धेरै कारकहरु मा निर्भर गर्दछ। यो पहिलो पटक भ्रमण गर्नेहरूको लागि, वा सायद विशेष छुट्टिहरूको लागि हुन सक्छ। सायद तपाई पनि एक payday छुट वा साप्ताहिक बिक्री सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ। सैलून प्रमोशनहरूको साथ, तपाईं तपाईंको सालुनको लागि यातायात बढाउन र बुकिंग बढाउन सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, जब तपाईले बुकि inमा वृद्धि भएको छ, तपाईले बिक्री उत्पादन गर्ने बढी सम्भावना छ त्यसैले राम्ररी कार्यान्वयन गरिएको सैलुन प्रमोशनले पनि राजस्व बढाउन सक्छ।
सामाजिक मिडिया मार्केटिंगको उपयोग गर्नुहोस् - सौन्दर्य समुदाय हालसालै सोशल मिडियामा फल्दै छ र यो महत्वपूर्ण छ कि सैलुन मालिकहरूले यसको प्रयोग गर्नु पर्छ। तपाईको सलुनलाई सजिलो बनाउनको लागि सँधै एक मिडिया खाता सेटअप गर्नुहोस् तपाईको सलुनलाई अधिक चासो राख्ने संरक्षकहरूले पत्ता लगाउन सजिलो होस्। एकचोटि तपाईले बिभिन्न सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूमा काम गर्ने खाता पाउनुभयो, तपाइँको ब्यापार मार्केट गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईंको विज्ञापन परिमार्जन गर्नुहोस् र सामाजिक बजार रणनीति प्रयोगकर्ताहरूको लागि अधिक व्यक्तिगत अनुभवको लागि प्रत्येक प्लेटफर्ममा आधारित। इन्स्टाग्रामको मुख्य रूपमा फोटोमा आधारित सेयरिंग प्लेटफर्मको फाइदा लिनुहोस् र इच्छुक ग्राहकहरूको ध्यान प्राप्त गर्न अद्भुत दृश्य पोस्ट गर्नुहोस्। तपाईंको ह्यासट्याग र कुञ्जी शब्दहरूलाई अप्टिमाइज गर्नुहोस् ताकि तपाईं सही प्रकारको ध्यान पाउँदै हुनुहुन्छ।
ईमेल मार्केटिंग को माध्यम बाट अधिक कनेक्ट हुनुहोस् - जब यो तपाइँको व्यापार अनलाइन मार्केटिंग गर्न आउँछ, ईमेल आधारित अभियान मार्फत तपाइँको व्यापार बजार बेवास्ता नगर्नुहोस्। यो ग्राहकहरु को लागी कभर गर्नु हो जुन तपाईको सामाजिक मिडिया खाताहरु पछ्याउँदैन तर तिनीहरुलाई तपाईको इमेल तपाईले दिएका छन्। ईमेल मार्केटि campaign अभियानको प्रयोगको फाइदा भनेको तपाईले सस्तो मूल्यका लागि धेरै परिणामहरू पाउनुहुनेछ। साथै, तपाईले ईमेल मार्केटि use प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ पहिले उल्लेखित मार्केटिंग विचारहरूको कार्यान्वयन गर्न। उदाहरण को लागी, तपाइँ एम्बेडेड रेफरल लिंक को साथ ईमेल पठाउन को लागी ग्राहकहरु लाई छूट को लागी एक मित्र को संदर्भ गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो ईमेल मार्फत बेवास्ता ग्राहकहरूको बिक्री वा पदोन्नती पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै र अधिक ईमेल मार्फत गर्न सकिन्छ र तपाईं एक प्रयोग गरेर यो प्रक्रिया अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ सैलून सूची प्रबन्धन प्रणाली.
तालिका सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहोस् - तपाईको सैलुनमा अपोइन्टमेन्ट बुक गर्न अनुसूची सफ्टवेयरको प्रयोगले प्रक्रियालाई अनुकूलन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र दुबै कर्मचारी र तपाइँका ग्राहकहरूको लागि उपलब्धताहरू तालिका गर्न अनुकूल बनाउँदछ। यस प्रकारको सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा लाभ लिनका लागि ग्राहक र कर्मचारीहरूका लागि धेरै सुविधाहरू छन्। एउटा सुविधा जुन अपोइन्टमेन्ट बुकिंग सजिलो बनाउँदछ वास्तविक ग्राहक क्यालेन्डर अपडेटहरू जुन ग्राहकहरूले अनलाइन हेर्न सक्छन्। यसले ग्राहकहरूलाई निर्णय गर्न सजिलो बनाउँदछ जब उनीहरू उनीहरूको रुचि उपचारको लागि भेट्ने समय तालिका बनाउँदछन्। त्यस बाहेक, तालिकाबद्ध सफ्टवेयरले तपाइँका ग्राहकहरूलाई उनीहरूको भेटघाटहरूको सम्झना गराउँदछ जुन तिनीहरूले तपाइँको सलुनमा सेट गरेका छन्। यदि ग्राहकहरू रद्द गर्नुपर्‍यो भने, कम्तिमा तपाईंलाई दिनको बारेमा सूचित गरिने छैन। यसले तपाईंलाई अर्को अपोइन्टमेन्ट स्वीकार्नको लागि समय खाली गर्न अनुमति दिन सक्छ।
स्थानीय गतिविधिहरूमा सामेल हुनुहोस् - एउटा चीज जुन धेरै सलुनहरूले प्रयोग गर्दैनन् स्थानीय समुदाय हो। सबै भन्दा राम्रो सैलुन समुदाय संग कुनै प्रकारको सम्बन्ध छ किनभने, पछि, त्यहाँ जहाँ तिनीहरूको व्यवसाय को सबै भन्दा बाट आउँछ। त्यसैले सलुनहरूले स्थानीय गतिविधिहरूमा सामेल हुन यथासक्दो गर्नुपर्दछ। घटनाहरू छुट्टीको लागि हो वा फेसन कार्यक्रमको लागि, केवल तपाईंको समर्थन देखाउँदा तपाईंको व्यवसायको नाम त्यहाँ फैलिन र तपाईंको ग्राहक बढाउन सक्दछ।
तपाईंको समुदायलाई फिर्ता दिनुहोस् - स्थानीय गतिविधिहरूमा सामेल हुने कुरा गर्दै, स्थानीयहरूसँग सम्बन्ध बनाउने एउटा तरिका हो समुदायलाई फिर्ता दिने। हुनसक्छ स्थानीय अधिकारिकहरूलाई सोध्नुहोस् कि समुदायलाई मद्दत गर्न सक्ने तरिकामा। हुनसक्छ तपाईं घरबारविहीनहरूलाई नि: शुल्क कपाल काट्न सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईं भविष्यमा भइरहेको एक चैरिटी घटनालाई फन्ड गर्न सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो नयाँ सम्भावित क्लाइन्टहरूसँग मुछिएको एउटा पौष्टिक तरीका हो जुन हृदयलाई शान्त गर्दछ।
तपाइँको सलुन अनलाइन निर्देशिका मा सूचीबद्ध गर्नुहोस् - भर्खरका तथ्या .्कहरूले देखाउँछन् कि मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूले अधिक स्टोर अनलाईन वा उत्पादन अनलाइन व्यापार खोज्छन्। यसै कारणले गर्दा तपाइँले तपाइँको व्यावासायिकलाई पहिचानयोग्य र सम्भव भएसम्म फेला पार्न योग्य बनाउन आवश्यक छ। यो गर्नको लागि एक तरीका भनेको अनलाइन डाईरेक्टरीहरूमा तपाईंको व्यवसायलाई सूचीबद्ध गरेर जस्तै Yelp वा Google Business मा हो। यस तरिकाले, इच्छुक संरक्षकहरू सजिलैसँग तपाइँको सैलून फेला पार्न र तपाइँको खुल्ने समय र तपाइँले प्रदान गर्ने सेवाहरू पहिचान गर्न सक्दछ।
Retargeting विज्ञापन को उपयोग गर्नुहोस् - एक पटक कुनै ग्राहकले तपाइँको साइट भ्रमण गर्‍यो, ती खरीदमा अन्त हुन्छ कि हुँदैन, तिनीहरूलाई नयाँ ग्राहकहरू भन्दा कन्भर्टर गर्न सजिलो हुन्छ जसले तपाईको ब्रान्डसँग कहिले पनि अन्तर्क्रिया गरेका छैनन्। यस प्रकारका ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्न, retargeting विज्ञापनको उपयोग गर्न उत्तम हो। यदि तपाईंले भर्खर भर्खरै नयाँ उत्पादन वा उपचार सुरू गर्नुभयो भने, त्यसोभए अघिल्लो ग्राहकहरूको सूची जाँच गर्नुहोस् जुन उनीहरूमा चासो देखा पर्दछ र उनीहरूलाई लक्षित उत्पादन / उपचारका लागि विज्ञापनको साथ लक्षित गर्नुहोस्।
तपाईको सैलुनको बजारको मतलब बिलबोर्डमा ठूलो पैसा खर्च गर्नु वा शहर वरिपरिको यात्राहरूलाई पोष्ट गर्नु हुँदैन। त्यहाँ आज धेरै गर्न सक्ने व्यावहारिक मार्केटिंग आईडियाहरू छन्।
यो सबै तपाइँको लक्षित बजारको साथ सम्पर्कमा रहनुको साथै स्थानीय समुदायमा तपाइँको सैलुन खोल्ने बारेमा हो। यी मार्केटिंग रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्न सुरु गर्नुभन्दा पहिले अब धेरै समय नबन्नुहोस् ताकि तपाईं तिनीहरूलाई जति सक्दो चाँडो अझ राम्रो हुनको लागि अनुकूल बनाउन सक्नुहुन्छ।
टैग: इमेल मार्केटिङस्थानीय गतिविधिहरूपदोन्नतिपुनरागमनशोसैलुन मार्केटितालिका सफ्टवेयरसामाजिक मिडिया मार्केटिङ
ब्लॉकचेन टेक्नोलोजी र चीजहरूको इन्टरनेटको संयोजनको संभावनाहरू